इटलीमा ती महिलाले फैलाएको कोराना भाइरस - Aathikbazarnews.com इटलीमा ती महिलाले फैलाएको कोराना भाइरस -
graphic design and creative writing year9creative writing worksheets written application letter format go to your room now and do your homework best english essay writers affordable price essay creative writing poem about love pa school personal statement editing services god helps those who help themselves essay in urdu cover letter writing creative translation as creative writing writing college personal statement stressed doing homework rocky run homework helpers creative writing prompts drama creative writing camp ottawa grade 11 humss creative writing creative writing smu the differences between creative writing and technical writing university of minnesota creative writing faculty warwick university ma creative writing descriptive phrases for creative writing do online essay writers work creative writing yale university describing weather creative writing reliable dissertation writing services uk writers resources from paragraph to essay 2nd edition creative writing names doing homework in the library find an essay writer
बैंक अफ काठमाण्डूका ग्राहक महानुभावहरुलाई Lavie रेस्टुरेन्टमा १०% छुट
इटली आफैमा अति विकर्सित र सम्पन्न राष्ट्र मानिन्छ । तर, अहिले कोरोना भाइरसको महामारी विश्वमा सबैभन्दा बढि इटलीलाई नै ग्रसित बनाएको देखिएको छ । चीन भन्दा ७ हजार ५०० सय किलोमिटर टाढाको देश इटलीमा कसरी कोरोना भाइरस पस्यो । यसको भित्री कथा डरलाग्दो मात्रै छैन । सुन्दा पनि शरीर नै जिरिङ्ग हुने खालको छ ।
इटलीका प्रधानमन्त्री जेसेप कोन्टेले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै रुदै दिएको अभिव्यक्तिले प्रस्टै देखिन्छ । इटलीमा विश्वकै सबैभन्दा बढि कोरोनाको आक्रमण र हजारै मान्छै मरिरहेका छन् ।
इटलीका प्रधानमन्त्रीले रुदै जनताको नाममा सम्बोधन गर्दै भनेका थिए । अब जनताले साथ दिनुप¥यो । हामी सबै एक हौ । हामीलाई लास जलाउन ठाउँको अभाव भएको छ ।
यो अवस्था कसरी आयो त कथा यस्तो छ ।
चीनमा कोरोना भाइरसको आक्रमण उच्च भएकै बेला चीनको एक महिला चीनको वुहानबाट इटलीको राजधानी रोम पुगिन र उनीले एउटा प्ले कार्ड लिएर भनेकी थिइन् । ‘प्रिल्ज हक मि, आइएम नट अ भाइरस आइएम ह्यूमन विङ’ यस्तो प्लेकार्ड लिइर उभिएकी युवतीलाई इटलीका जनताले २ दिनमा ५ हजार भन्दा बढी मानिसले हक गरे । कतिले उनीले लगाएको माक्स समेत निकालिदिएका थिए । एजेन्सीले बताए अनुसार ति महिला कोरोना संक्रमित थिएन् ।
त्यसको केही दिनमै ति युवतीले जानी नजानी गरेको एउटा कामले आज इटलीमा हजारौले ज्यान गुमाएका छन् । भने लाखौ कोरोना बिरुद्ध लडिरहेका छन् । यो मैले लेख्नुको मुख्य आशय के हो भने अब सचेत बनौ घर बाहिर नजाउ । सरकारले भनेको र विश्व स्वास्थ्य संगठनले दिएको निदेशन पालना गरौं । घरबाटै अफिसको काम गरौं ।
सकारात्मक सोच राखेर दिन बिताउ । चिन्ता कति पनि नगरौं । घरबाट पटक्कै बाहिर ननिस्कौ । इटलीको एउटा सानो गल्तलिे आज देश रोएको छ । हजारौं कोरोनाका कारण मरेका छन् । भनिन्नछ लास जलाउने ठाउँको अभाव छ ।
इटलीको लुवाङ शहरबाट शुरु भएको कोरोना अहिले सबै प्रान्तमा फैलिएको छ । यसबाट पाठ सिकौ र सचेत बनौ ।
अहिले इटलीको अर्थतन्त्र तहस नहस भएको छ । शेयर बजार र पर्यटन बजार खरानी जस्तै छ । चीन भन्दा बढि मान्छे मरेका छन् । यो पाठ सबै नेपालीले अब नसिके कहिले सिक्ने । हामी सबै सचेत बनौ ।
विदेशबाट आएका सयौ नेपाली अस्पताल जाउ र जाँच गराऔं । स्वास्थ्य रहैं । देश र जनता बचाउने दायित्व हामी भन्दा बढि विदेशबाट आएका नेपाली हाम्रा दाजुभाइको हो भन्न अब पछि पर्नु हुँदैन ।
त्यसकारण रोग नलुकाउ अस्पताल जाऔं र जीवन जीउ ।
नेपाल गरिब देश हो विश्वका धनी देशले अहिले कोरोनासंग लडि रहेका छन् । सफल हुन कति कठिन भइरहेको छ । त्यो प्रस्तै छ । त्यसकारण हामी नेपालीहरु आफै सचेत बनौ । घरबाट बाहिर पटक्कै नजाउ । राज्यले गरेको लकडाउनलाई घरमै बसी सहयोग गरौं । सचेत भया ।
एक प्रतिक्रिया on “इटलीमा ती महिलाले फैलाएको कोराना भाइरस”
डा.शास्त्र दत्त पन्त says:
तपैले भनेका सबै कुरा ठीक हुन् .तर इटाली कि महिलाले जस्तै नेपालको सरकारले कतारबाट आफेका ओफ्का सबै यात्रुलाई क्वारेन्टिनमा नराखेर घर पठाइदियो . ठुलो गल्ति भयो . त्यस्तै कंचनपुर, बाँके, बिरत्नागरका प्रशाशाक्ले भारतबाट आएका सबैलाई घर पठाई दिएकाले कोरोना गाउँ गाउँमा पुगेकोछ . अब पच्चुतायेर केकाम . छोड्नेमा को दोषी हो सख्त कारबाही हुनैपर्छा .
शिखर इन्स्योरेन्समा ७७ जिल्लाकै ५७ हजार बढीले गराए कोरोना बीमा, ३ करोड १६ लाख बीमाशुल्क संकलन !
अजोड इन्स्योरेन्सको नाफा एक करोड ६८ लाख
कोरोना बीमामाथि दावी पर्नेको कूल संख्या चार
तोलामा ८ सयले घट्यो सुनको मूल्य
सनराइज बैंकद्घारा सातैं प्रदेशमा सुरक्षात्मक उपकरण वितरण गर्दै
५ लाख ४० हजार आवेदकले पाए प्रभु लाइफको १० कित्ता, के भाग्यमानीमा तपाईं हो?